सपना र बिनय बाउछोरी भन्दै किन यस्तो गरे? बाहिरियो यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सपना र बिनय बाउछोरी भन्दै किन यस्तो गरे? बाहिरियो यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित)
काठमाडौं : बीबीसीको प्रभावशाली सय महिलाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरलाई ध’ म्की दिएको आ’रो’प’मा विनयजंग बस्नेत पक्राउ परेका हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आइतबार सपनाले दिएको उजुरीको आधारमा प्रहरीले बस्नेतलाई प’क्राउ गरेको हो । परिसरका एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार युट्युबमार्फत् सपनाको न’ग्न त’स्बि’ र सार्वजनिक गरिदिने ध’म्की दिने बस्नेत विरु’द्ध उजुरी परेपछि मंगलबार परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
बस्नेतविरुद्ध प्रहरीले अ’भ’द्र व्य’वहा’रको मु’ द्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सपना र बस्नेत दुवैजना मिलेर बेवारिसे श’वको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । सपनाको उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि बस्नेतलाई काठमाडौं गोंगबुबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी सिंहको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा आइतबार सपनाले दिएको उजुरीको आधारमा प्रहरीले बस्नेतलाई प’क्राउ गरेको हो । परिसरका एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार युट्युबमार्फत् सपनाको न’ग्न त’स्बि’ र सार्वजनिक गरिदिने ध’म्की दिने बस्नेत विरु’द्ध उजुरी परेपछि मंगलबार परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
फेरि गुरू बम्जनलार्इ अाइपर्यो अर्काे यस्तो अापतः बलात्कृत भएकि भन्दै गुहार माग्दै अाइन मिडियामा (भिडियो)